Qaramada Midoobay oo sheegtay 337 ruux inay ku dhinteen weerarada Shabaab ee Muqdisho | Baydhabo Online
Qaramada Midoobay oo sheegtay 337 ruux inay ku dhinteen weerarada Shabaab ee Muqdisho
War-saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Qaramada Midoobay ee Somaliya ayaa lagu sheegay in weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan Muqdisho ay sii kordheen sanadkan marka loo eego sanadihii ka horeeyay.
War-saxaafadeedka ayaa lagu cambaareeyay weerarada joogtada ah ee ay Al-shabaab ka geystaan Muqdisho,waxaana Wakiilka Qaramada Midoobey ee Somaliya Michael Keating,uu sheegay in 337 qof oo rayid u badan lagu dilay Muqdishi sanadkan 2017-ka taas oo aad uga badan xilligan oo kale sanadkii 2015-kii.
Waxaa uu xusay in weerarrada Al-Shabaab ee Muqdisho ay kor u kaceen 50% iyada oo tirada ugu badan ee ku dhimatay ay yihiin dad shacab ah.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in tobankii maalmood ee la soo dhaafay ay Al-Shabaab Muqdisho ka fulisay 12 weerar oo ay ku dhinteen 28 qof 31 kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen.
Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay saddexdii bil ee la soo dhaafay weerarada Shabaab ay gaystaan inay ku dhinteen dadkaasi badan, kuwaasi oo siyaabo kala duwan ugu dhintayo qaraxyo ka dhacay Muqdisho.
Qaraxii ugu khasaaraha badnaa ayaa noqday kii lagu weeraray Taliyaha ciidanka Xooga dalka Somaliya oo dhacay Axadii aan soo dhaafnay ee todobaadkaan, kaasi oo Maamulka Degmada Dayniile sida ay xaqiijiyeen ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 28 ruux.
Tan iyo markii Madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Ururka Al Shabaab, waxaa sii kordhaayay weerarada Shabaab ay ka gaysanayaan Muqdisho.